Taag-darrida Qabiilka - Central Youth LinkCentral Youth Link
← Jiilka Cusub; Gabdhaheena
Diyaar-garaynta Miskaxda Soomaaliyeed →
Posted on November 8, 2013 by Abdul
Qabiilkaaga iyo qaranka kee mudan? Waxaa shaki la’aan ah in qabiilkaagu aanu difaaci karin xaduudaha Soomalia, bad, birri iyo cir midnaba! Isla mar ahaantaana aanu awood u lahayn in uu iska difaaco duullaan dibadda kaga yimaada.
Ingiriis, Talyaani, Faransiis iyo kuwo kale midna ma imaan lahayn gayiga Soomaaliyeed haddii qabiilku uu awood uu wax ku difaaco leeyahay. 20 sano iyo goo go’ Soomaaliya halaqyo-mareen ma noqoteen; sunta laguma aaseen, hubka, raashinka iyo dawoda dhacday lama keeneen dalka haddii qabiilku taagleeyahay! Dalkeena ciddii rabta iskama galilahayn oo visa/dal ku gal ayaa la weydiinlahaa; dalal iyo ciidamo xuduudaha Soomaaliya iska tillaaba goorta ay rabaan ma dhicilahayn oo waxaa jiri lahaa geesh ilaaliya ciidda iyo calankeena.
Dulucda mawduucu waxay tahay, in qabiilooyinka Soomaaliyeed aanay difaaci karin calankeena, ciiddeena iyo sharateena, balse qarankeenu (Dowladdeena iyo dadkeena oo qarannimo aaminsan) uu difaaci karo sharafteena, calankeena iyo ciiddeena. Iskuul, Isbitaal, waddooyin, Dakado iyo ganacsi bullaala oo nabadgalyo hasyta waxaa laga helaa dowlad. Maxaa dunidu ku nacday qabiilka oo innaga qoorta noo suray? Wax laga dheefayo ayaan jirin innaba ha le ekaatee, oo aan ka ahayn, baaba’, bur bur iyo in sidii la rabo lagaa yeelo!
Faalo ka bixi Cancel reply